Kuraas Lagu Doortey K/galbeed Gudiga Doorashaduna Go’aan ka Gaareen oo R/wasaare Rooble Soo Dhaweeyey. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Kuraas Lagu Doortey K/galbeed Gudiga Doorashaduna Go’aan ka Gaareen oo R/wasaare Rooble...
Kuraas Lagu Doortey K/galbeed Gudiga Doorashaduna Go’aan ka Gaareen oo R/wasaare Rooble Soo Dhaweeyey.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo dhoweeyay go’aanka Guddiga Doorashooyinka heer Federaal ee FEIT ay ka qaateen kuraas lagu doortay magaalada Baydhabo oo dib loogu celinayo doorashadooda.
Guddiga doorashada ayaa xalay soo saaray go’aan dib loogu celinayo doorashada labo kursi oo dhawaan lagu doortay Koonfur Galbeed oo la sheegay in habka doorashadoodu u dhacday ay baalmarsanayd habraaca doorashada.
Raysal wasaaruhu ayaa guddiga xalinta Khilaafaadka iyagana faray inay waajibaadkooda u gutaan si caddaalad ah oo waafaqsan Heshiisyada iyo Habraacyada doorashada.
Ra’iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in ay ka go’antahay ka jawaabista tabashooyinka la xiriira daahfurnaan la’aanta doorashada ee kasoo yeeray daneeyayaasha doorashooyinka oo ay ku jiraan Golaha Musharixiinta, Bulshada Rayadka ah iyo Beesha Calaamka.
Hoos ka aqriso War Saxaafadeed qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha:-
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxed Xuseen Rooble wuxuu uga mahadcelinayaa Guddiga Doorashooyinka heer Federaal ee FEIT Go’aanada ay qaateen ee la xiriira ilaalinta Hufnaanta Doorshada, wuxuuna ku boorinayaa Guddiga xalinta Khilaafaadka in iyaguna ay waajibaadkooda u gutaan si cadaalad ah oo waafaqsan Heshiisyada iyo Habraacyada doorashada.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya isaga oo gudanaya mas’uuliyadda ka saaran in doorashooyinka ka socda dalku ay noqdaan kuwo daahfuran, lagu kalsoonaankaro kuna qabsooma waqtiga loo qorsheeyay, wuxuu la wadaagayaa Bulshada Soomnaaliyeed sida ay uga go’antahay ka jawaabista tabashooyinka la xiriira daahfurnaan la’aanta doorashada ee kasoo yeeray daneeyayaasha doorashooyinka oo ay ku jiraan Golaha Musharixiinta, Bulshada Rayadka ah iyo Beesha Calaamka.
Si loo saxo arrimaha laga cawday oo ay ka mid yihiin
A- Hogaaminta Doorashooyinka.
B- Madaxbanaanidda Guddiyada Doorashoyinka.
C- Ku dhaqanka Hab-raacyada Doorashada.
Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu cadaynayaa in mas’uuliyadda hogaaminta siyaasadeed ee Doorashooyinka ay leeyihiin Golaha wadatashiga Qaranka oo uu isagu Madax uyahay sidaas awgeed Goluhu wuxuu balanqaadayaa Madaxbanaanida Guddiyada Doorashooyinka oo mas’uul ka ah hirgalinta Heshiisyada Siyaasadeed ee hagaya Doorashooyinka.
Ra’iisulwasaauruhu sidoo kale wuxuu xaqiijinayaa in ay waajib ku tahay Xubnaha Golaha wadatashiga Qaranka, Guddiyada Maamulka Doorashooyinka iyo daneeyayaasha Doorashooyinkuba in ay u hogaansamaan ku dhaqanka Heshiisyada iyo habraacyada hirgalinta Doorashooyinka isla markaana aan la aqbalidoonin ficilkasta oo baalmarsan ku dhaqankooda .
Hadaba si loo xaqiijiyo in doorashooyinku noqdaan kuwa hufan, laguna kalsoonaan karo, waxaa la xoojinayaa Doorka la socodka iyo u kuurgalista daahfurnaanta Doorashooyinka ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha wuxuuna magacaabaya Ra’iisul Wasaaruhu Wakiilo u qaabilsan arrimahan, kuwaas oo si joogto ah ula soconaya dhaqdhaqaaqa Doorashada Warbixinna ka siinaya Ra’iisulwasaaraha.
Si waafaqsan Heshiiskii Doorashooyinka ee 17-09-2020, Heshiiskii 27-05-2021 iyo Habraacyadii Doorashooyinka ee 01-10-2020 iyo 24-08-2021, isla markaasna laga faaiidaysanayo khibradda laga helay khaladaadkii keenay cabashooyinka ka yimid qaar ka mid ah kuraasta Baarlamaanka ee la qabtay, Ra’iisulwasaaruhu wuxuu farayaa Guddiyada Maamulka Doorashooyinka in ay qaadaan talaabooyinka soo socda.
1- Ka hor inta aan la qaban kursi kasta ee Golaha Shacabka waa in la cadeeyo, la diiwaangaliyo, lana shaaciyo Magacyada Xubnaha Guddiga soo xulista Ergada ee ka kooban Duubabka\_Caaqilada iyo Bulshada Rayadka ah ee Beelaha\_Jufooyinka Kursiga iska leh.
2- Guddiga Doorashooyinka ee Heer Dawlad-goboleed ee SIEIT waa in ay la wadaagaan Guddiga Doorashooyinka heer Federaal, Guddiga Xalinta Khilaafaadka iyo Wakiilada la socodka Arrimaha Doorashooyinka ee XRW magacyada xubnaha Guddiga soo xulista ergada ka hor inta aan la diiwaangalin lana shaacin.
3- Soo xulista ergada waxaa si buuxda ugu madaxbanaan Duubabka\_Caaqilada iyo Bulshada Rayadka ah ee Beesha\_Jufada leh Kursiga lagumana faragalinkaro.
4- Ka hor inta aan la galin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa Guddiyada xulista Doorashada iyo Ergooyinka doorashada si ay howlahooda ugu fuliyan si waafaqsan shuruudaha iyo habraacyada Doorashooyinka.
5- Waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin, Guddiga soo xulay ergada doorashada galaysa, Warbaahinta Madaxa banaan, iyo Goobjoogayaal Madaxbanaan si martqaati looga noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta Doorashada Kursi kasta.
6- Guddiyada Maamulka Doorashooyinka ee heer Federaal, heer Dawlad-goboleed iyo Xalinta Khilaafaadku waa in ay si buuxda u hubiyaan in Musharixiinta u tartamaya Kuraasta Baarlamaanka, Guddiyada Xulista Ergooyinka iyo ergooyinka la soo xulay ay buuxiyeen Shuruudaha loo dajiyay ee ku xusan heshiisyada iyo hab-raacyada lagu heshiiyay.
7- Ra’iisul wasaaruhu wuxuu ku adkaynayaa dhamaan Guddiyada Maamulka Doorashooyinka iyo Guddiga xalinta Khilaafaadku in ay si buuxda ugu dhaqmaan Heshiisyada iyo habraacyada hagaya Doorashooyinka, cidkasta oo isku dayda in ay baalmartana waa lagula xisaabtamayaa.
8- Si loo ilaaliyo wadashaqaynta Guddiyada Doorashooyinka, Ra’iisulwasaaruhu wuxuu ku wargalinayaa dhamaan Guddiyada Doorashooyinka herarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala danbaynta kuna dhaqmaan heshiishyada iyo habraacyada doorashada ee dagsan.
9- Guddiyada Maamulka Doorashooyinka iyo Madaxda Dowladaha Xubnaha ka ah Dawladda Federaalka ah waxaa lagu adkeynaayaa in ay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinkooda.
Previous articleGudiga Doorashada Heer Federal oo Waxba kama jiraan ka Dhigay Doorashada Labo Kursi Baydhabo ka Dhacdey.
Next articleGudiga Doorashada Heer Federal Go’aankii ay Ka Gaadheen Labo Kursi Baydhabo Lagu Doortey oo Mid Gudiga Ka Tirsanaa Ka Horyimid.